Ụlọ ahịa azụmaahịa Indo-German mara ọkwa ndị otu kọmitii ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Ụlọ ahịa azụmaahịa Indo-German mara ọkwa ndị otu kọmitii ọhụrụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụlọ ahịa azụmahịa Indo-German
Ụlọ Indo-German Chamber of Commerce (IGCC) taa kwupụtara nhọpụta Puneet Chhatwal, Onye isi nchịkwa & onye isi ụlọ ọrụ, Indian Hotels Company (IHCL), ka onye isi oche ọhụrụ nke ụlọ ahụ. Onye ọchụnta ego azụmaahịa zuru ụwa ọnụ, Puneet Chhatwal na -eweghara ọchịchị site n'aka Onye isi ala na -apụ apụ, Kersi Hilloo (Onye isi nchịkwa Fuchs Lubricants India).
Ndị IGCC họpụtakwara osote onye isi ala na onye na -echekwa ego na kọmitii ya.
Germany bụ onye ọchụnta ego India kachasị na EU na 7th onye na -etinye ego na mba ofesi na India.
IGCC bụ German Bi-National Chamber (AHK) na mba ofesi, yana nnukwu ụlọ ahịa na India nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ otu 4,500 n'ofe ngalaba dị iche iche.
IGCC kwuputara ọkwa nhọpụta nke ndị otu kọmitii ọhụrụ ya, Anupam Chaturvedi (Onye isi & onye nnọchite anya DZ BANK India) dị ka onye isi oche, yana Kaushik Shaparia (CEO Deutsche Bank India) dị ka onye na -edebe ego.
N'ikwu okwu na mmemme ahụ, Puneet Chhatwal, MD na onye isi oche, IHCL kwuru, sị: “Ọ bụ ihe nsọpụrụ ịhọpụta dịka Onye isi ala, anyị na -atụkwa anya ibute ọrụ IGCC ka ọ bụrụ nnukwu ihe mkpalite maka ịkwalite mmekọrịta azụmahịa n'etiti. India na Germany. N'oge ugbu a, enwere mkpa dị ukwuu maka mmekorita ụwa, anyị ga -aga n'ihu na -akwado ụlọ ọrụ ndị otu anyị n'ịmepụta ohere ndị ọzọ, itinye aka na ịba uru. "
N'ikwu maka nhọpụta ndị ọhụrụ, Stefan Halusa, Director General, IGCC kwuru, sị: “Anyị na -anabata ndị otu kọmitii ọhụrụ na IGCC ma na -atụ anya onyinye ha dị oke mkpa. Anyị kwenyere na Maazị Chhatwal, n'ọrụ ya dị ka Onye isi ala, ga -eweta ahụmịhe obodo ya na nghọta pụrụ iche nke azụmahịa na Germany na India. Germany bụ onye ọchụnta ego India kachasị na EU na 7th onye na -etinye ego na mba ofesi na India. Nke a ga -enye anyị ohere inyocha mpaghara ọhụrụ maka uto akụ na ụba ka anyị na -eji ike nke mba abụọ a eme ihe. "
Puneet Chhatwal nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ nke ahụmịhe ụwa. Ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ nnabata ọbịa kacha ukwuu na South Asia ugbu a, IHCL. Tupu nke a, ọ nweela ọrụ idu ndú na Germany, na Europe. Ọ bụkwa onye isi oche nke Association Hotel nke India na onye isi oche nke Kọmitii CII National Tourism.
IGCC bụ ụlọ ọrụ a na -akwanyere ùgwù na India na Germany. Ọ bụ nnukwu ụlọ German Bi-National Chamber (AHK) na mba ofesi, yana nnukwu ụlọ ahịa na India nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ ndị otu 4500 gafee ngalaba dị iche iche. Ihe dị ka ụlọ ọrụ German 1,800 na -arụ ọrụ na India, na -enye ihe karịrị ọrụ 500,000 na mba ahụ.
Ntọala guzosiri ike na 1956, Indo-German Chamber of Commerce (IGCC), ọgbakọ anaghị akwụ ụgwọ yana afọ 65 nke nkwado mmekọrịta dị ugbu a na mpaghara 6 n'ofe India yana otu na Germany. Ọ na-enye ọtụtụ ọrụ dịka Nchọpụta Mmekọ Azụmaahịa, Nhazi ụlọ ọrụ, Ndụmọdụ iwu, mbanye ndị ọrụ HR, ire ahịa na akara, ahia ahia, ozi na mgbanwe ihe ọmụma site na mbipụta, ndị nnọchi anya na ihe omume, yana ọzụzụ.